Tim Cook dia miresaka momba ny fitsipi-pitondrantenan'i Apple ankehitriny | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iPad, About us, Apple products
Ny fivoahana mitranga ao amin'ny sehatry ny Apple: fitaovana, vokatra vaovao, fiasa tsy fantatra vaovao (ary maro hafa) dia mahatonga ny Big Apple ho malemy sy mora tohina kokoa. Ho azy ireo dia mety hampanaintaina izany fa ho anay mpampiasa kosa dia tokony hahatsapa ho ratsy satria, raha manantena ny hahita zavatra maro ao amin'ny keynote ary efa fantatray sahady ny zavatra rehetra hatolotr'i Tim Cook sy ireo mpiara-miasa aminy, tsy hampihomehy izany. Matetika ny famoahana dia avy amin'ny mpiasan'ny Apple, mpiasan'ny orinasa na olona tsotra fotsiny izay manolo-tena hangalatra tsiambaratelo miafina amin'ny orinasa lehibe toa an'i Apple.
Androany, ny mpiasan'ny Apple dia nahazo mailaka avy amin'i Bruce Sewell, filoha lefitra ary mpanolotsaina ankapobeny an'ny paoma lehibe, izay resahina ny fitsipi-pitondran-tena ankehitriny. Ho fanampin'izany, ny endrika nomerika an'ity kaody fitondran-tena namboarina ho an'ny iBooks noforonina tamin'ny sehatra ity dia miraikitra amin'ny mailaka Mpanoratra iBooks ka ao anatiny dia afaka mahita horonan-tsary, widgets, sary ianao ary mazava ho azy, ny fitsipika fototra amin'ny fitondran-tena antenain'ny Apple amin'ireo mpiasany.
Manoratra aho mangataka anao hanao zavatra tena lehibe - eo amin'ny lafiny ilanao fotoana kely hijerena ny politika momba ny fitondran-tena ataon'ny Apple. Notsipihany tamin'ny teny tsy azo antoka izay antenaina hitondra tena miaraka amin'ireo mpanjifantsika, mpiara-miombon'antoka, orinasam-panjakana ary mpiara-miasa aminay. Manantena izahay fa ny mpiasa Apple rehetra dia afaka mahatakatra sy manaraka ireo fenitra ireo.
Ny politika dia mifototra amin'ny soatoavina fototra apetraky ny fahamarinana, fanajana, tsiambaratelo ary ny adidy lehibe ananan'ny mpiasa Apple rehetra hanaraka ny fitsipiky ny lalàna, toy ny lalàna momba ny antitrust sy ny ady amin'ny kolikoly. Ny fiainana an'io fihetsika io dia ny fomba ahazoantsika ny fitokisan'ny mpanjifantsika sy ny mpiara-miasa aminay ary ny fitazonana toeram-piasana mahafinaritra any Apple.
Ny vondrona Business Conduct dia namorona kinova vaovao an'ny Politika amin'ny endrika iBooks. Ity boky ity dia azo ampiharina sy manintona miaraka amina galeriana, horonan-tsary, feo ary alim-pandeha maromaro; natao ho fanampiana anao hianatra momba ny fitsipiky ny Apple momba ny fitondran-tena ara-barotra. Azonao atao ny misintona ny boky vaovao amin'ny alàlan'ny fifanakalozana telefaona, na miditra amin'ny kinova tranonkala eto.
Raha manana fanontaniana na fampahalalana momba ny fitondran-tena heverinao fa manitsakitsaka ny politika ianao dia aza matahotra ny hiteny. Miresaha amin'ny mpitantana anao, ny solontenanao momba ny Human Resources, na mifandraisa amin'ny Business Conduct Helpline - izay azo atao amin'ny fomba tsy mitonona anarana.
Misaotra mialoha anao amin'ny fandraisana an-tanana izany ary mandray andraikitra amin'ny fanehoana fahamendrehana avo lenta amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa Apple.
Filoha lefitra zokiolona sy mpanolotsaina jeneraly
Ny fitsipi-pitondrantenan'i Apple dia nanjary tafahoatra
Araka ny efa hitanao, ny taratasy nalefa tany amin'ny boribory lava be io ary koa, araka ny efa nolazaiko anao, ny kinova ho an'ny iBooks an'ny fitsipi-pitondrantena Apple ankehitriny izay tsy maintsy itondrana ny mpiasan'ny Big Apple.
Ao anatin'ilay kaody niomerika dia misy ny lahatsarin'ireo mpitantana Tim Cook sy Apple izay misy Dating toy izao manaraka izao:
Fotoana mety foana hanaovana ny tsara. Ao amin'ny Apple, manao ny tsara isika. Na dia tsy mora aza. Raha mahita zavatra tsy mifanaraka amin'ny fenitra arahintsika ianao dia lazao.
Tim Cook dia mamporisika ny mpiasa hiresaka momba ny fanitsakitsahana an'ity fitsipi-pitondrantena ity hisorohana ny fitondrantena ratsy ary maninona no tsy, tete azo.
Fampahalalana bebe kokoa - Fantatsika ny famoahana maro, tsara ve ny mahafantatra momba ny tsaho?
Loharano - Mac Rumors
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tim Cook dia miresaka momba ny fitsipi-pitondrantenan'i Apple ankehitriny
Ahoana ny fahitana ireo rantsan-tànana izay efa notahirizinay tao amin'ny Touch ID